नेकपाले सैन्य बेसक्याम्प चलाएको भन्दै प्रहरीभित्र खैलाबैला ! सिन्धुली प्रहरीमा शक्तिशाली भूकम्प — Sanchar Kendra
नेकपाले सैन्य बेसक्याम्प चलाएको भन्दै प्रहरीभित्र खैलाबैला ! सिन्धुली प्रहरीमा शक्तिशाली भूकम्प
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सैन्य बेसक्याम्प चलाएको भन्दै प्रहरी भित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । उता सिन्धुली प्रहरीभित्र भने यो खबरले भूकम्प नै गएको छ ।
शनिबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका डिएसपी विनोद शर्माले नेकपाले बेशक्याम्प राखेर सैन्य तालीम चलाएको सूचना पाएको दावी गरेपछि पुरै प्रहरीभित्र हलचल ल्याएको छ। यद्धपि यसबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि भने हुन् सकेको छैन ।